သူတပါးထိခိုက်အောင် ဝေဖန်ခြင်း ကင်းဝေကြပါစေ...
Facebook ပေါ်မှာ သင်္ကြန်တုန်းက သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးတယောက်ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်လေး ပျံ့နှံ့ပြီး ရှုံ့ချခဲ့ကြပါတယ်... ထိုသရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကလည်း မျက်စိပိတ် နားပိတ်မှ မဟုတ်တာ သူ့သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေတာ သိမှာပါ... နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်းမှ ခေါ်ယူသတိပေးတယ်လို့ ဂျာနယ် တစောင်မှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်... ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ရင် ထိုမင်းသမီးမှ မဟုတ်ပါဘူး တခြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာလည်း Facebook ပေါ်မှာ ပလူပျံနေတာကို တွေ့ကြရမှာပါ... သရုပ်ပျက် အ၀တ်အစားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ တော်တော်များများရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဘယ်လို Message ပေးချင်လို့ တင်လည်း ကျွန်မနားမလည်ပါ... အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေ တင်တဲ့သူရဲ့ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက အမျိုးသမီးတွေ အဲ့လိုများ ၀တ်စားထားရင် Facebook ပေါ်တင်ကြမှာပါလား... ဒါမှမဟုတ် သူများက ရိုက်ပြီး ဒီလို Social Networking Websiteဆိုဒ်တွေမှာ တင်ထားမယ်ဆို ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်စေချင်ပါတယ်... ကျွန်မ ကာယကံရှင်တွေအစား နာလို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောပြပါစေ... ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူက သရုပ်ပျက်ဝတ်စားထားတာကို ရွေးပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင် သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစားနဲ့ ပျော်ပါးနေတဲ့သူတွေပဲ တွေ့မှာပါ... သင်္ကြန်မှာ သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစား မ၀တ်ဘဲ ပျော်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်... အဲလိုပုံတွေကော ဘယ်ချောင်ရောက်နေသလဲ... တရားစခန်းမှာ သင်္ကြန်တွင်း တရားဝင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေ၊ ဥပုသ်သတင်းစောင့်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ စတုဒီသာကျွေးတဲ့နေရာတွေမှာ ကူညီနေကြတဲ့ လူငယ်တွေ သွားကြည့်ပါ ဒုနဲ့ဒေး အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်... သင်္ကြန်မဏ္ဏပ်မှာ သရုပ်ပျက်အ၀တ်အစားဝတ်ပြီး လူငယ်တွေ ပျော်နေကြတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့... ရေကစားမဏ္ဏပ်အချို့မှာ ပိုက်ဆံပေးငှားပြီး အဖော်အချွတ်ဝတ်ပြီး တက်ကခိုင်းတာတွေ ရှိပါတယ်... ဒါလေးတွေကိုလည်း သတိချပ်စေချင်တာပါ...
စာရေးသူ မီးလေး at 15:070comments Links to this post
သင်္ကြန် ၅ရက်လုံး လျှောက်လည်ကြပြီး အသားအရည်ပျက်စီးထားတဲ့ ကိုကို မမတွေအတွက် ယခုအပတ်ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်မှ “ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကို ဒီလိုပြုပြင်ကြမယ်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးထဲမှ ပြန်လည်ကောက်နှုတ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... မွဲခြောက်မဲပြာသွားတဲ့ အသားအရေကို အရင်လို စိုစိုဝင်းဝင်းလေးပြန်ဖြစ်ဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ နည်းလေးတွေပါတဲ့...
၁။ အပွေးမရှိတဲ့ သနပ်ခါးတုံး - အပွေးမရှိတဲ့ သနပ်ခါးတုံးကို သွေးပြီး တစ်ကိုယ်လုံး လိမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အရေပြားကို အေးစေပြီး မိတ်ဖုတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
၂။ ဂျုံမှုန့် - ဂျုံမှုန့်ကို ပိုပြီး မှုန့်ညက်သွားအောင် ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့အမှုန့်နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ရှိသမျှချေးတွေ ပြောင်ပြီး အရေပြားချောပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
စာရေးသူ မီးလေး at 00:270comments Links to this post
၂၀၂၁ သင်္ကြန်မှာ တနင်္လာသား/သမီးတွေ အတာစားပါတယ်တဲ့... အတာစားတဲ့ တနလာင်္သား/သမီးတွေဟာ တနင်္လာနေ့ မနက် ၇နာရီနှင့် ၉နာရီကြားမှာ ရေချိုးသန့်စင်ပြီး အင်္ကျီအဖြူဝတ်ဆင်ကာ အရှေ့အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ထမင်းဖြူတစ်ဆုပ် တင်းတင်းဆုပ်ပြီး ၀ါးစားပါ။ ထို့နောက် သဗ္ဗဇယမင်္ဂလာ ဘုရားရှိခိုးနှင့် ဘုရားရှိခိုးပြီး ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆုတောင်းပါလေ...
ဒိဝါတပတိ အာဒိစ္စော၊ ရတ္တိမာ ဘာတိစန္ဒိမာ၊
သန္နဒ္ဓေါ ခတ္ထိယော တပတိ၊
အထသဗ္ဗမဟောရတ္တိံ၊ ဗုဒ္ဓေါတပတိ တေဇသာ။
တာဒိသံ တေဇသမ္ပန္နံ၊ ဗုဒ္ဓံ ၀န္ဒာမိ သာဒရံ
နမက္ကာရာ နုဘာဝေန၊ သောတ္ထိမေ ဟောတု သဗ္ဗဒါ။
အာဒိစ္စော - ရောင်ခြည်တထောင် အလင်းဆောင်သည့် ထွန်းပြောင်ပ၀င်း ရှင်နေမင်းသည်၊ ဒိဝါ - နေ့အခါ၌ လောကအလယ် ဂုဏ်မြင့်ကြွယ်၍ တင့်တယ်ပါပေ၏။
စာရေးသူ မီးလေး at 12:000comments Links to this post
“အတာကူးတဲ့ တန်ခူးလချိန်ခါ နှစ်ကူးသင်္ကြန်မှာ သူလေးနဲ့တွေ့ရပုံမှာ မေ့လည်းမမေ့နိုင်စရာ...” သီချင်းအစား “ကိုကြီးကျော် ကိုကြီးကျော် ကျော်ကျော်ကျော်ကျော် တို့ကိုကြီးကျော်...”ဆိုတဲ့ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံနဲ့အတူ အိပ်ရာက နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အင်း ကိုကြီးကျော်လည်း တောင်ပြုံးချိန်ပဲ မြူးရတာ ပျင်းနေတယ်ထင်ပါတယ်လို့ စိတ်ထဲက ညဉ်းနေမိတယ်။ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်၊ ရေချိုးပြီး မနက်ခင်းလုပ်စရာရှိတာတွေ အစသတ်လိုက်ပြီး မနက်စာစားလိုက်တယ်။ အဲ့အချိန်ထိ ကိုကြီးကျော်က ကိုကြီးကျော်တုန်း... :)
သိကြားမင်းကို အတာအိုးနဲ့ ကြိုတယ်... ခုချိန်ထိ ဘာကြောင့် အတာအိုး (ခုနစ်နေ့နံပါတဲ့ အညွှန့်တွေနဲ့ သင်္ကြန်ပန်း)တွေနဲ့ ကြိုရတယ်ဆိုတာ မီးလေးတကယ်ကို မသိသေးဘူး... ငယ်ငယ်တုန်းက သူများတွေ သိကြားမင်းဆင်းမယ်ပြောတော့ မေမေ့ကို သိကြားမင်းက ဘယ်လိုဆင်းတာလည်း မေးခဲ့ဖူးတယ်... အဲ့တုန်းက မေမေက မနက်ဖြန် ဆင်းမှာ လေဆိပ်မှာ ဦးခင်ညွှန့်တို့ သွားကြိုမယ်လို့ ပြန်ဖြေတော့ သိကြားမင်းဆိုတာ လေယာဉ်နဲ့ဆင်းလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားလို့ ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်... ခုချိန်ထိ သိကြားမင်းက ဘယ်ကိုဆင်းပြီး ဘယ်မှာတည်းတယ် မသိသေးပါဘူး... တည်းတဲ့နေရာများသိရင် လက်တို့ကြပါဦး မြင်ဖူးချင်လို့ပါ... :))
ပြောရင်းနဲ့ စကားတွေက ချော်တောငေါ့နေပြီ ပြန်တည့်ဦးမှ။
စာရေးသူ မီးလေး at 23:580comments Links to this post
ကာတွန်းဆရာ အော်ပီကျယ်ရဲ့ မျောက်များပုံပြင်ကို ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာမှန်း ညာမှန်း သေချာမသိဘဲ ရှေ့က လုပ်တဲ့သူတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ အပြုအမူကို မီးမောင်းထိုးပြ ထားတာပါ။ ဖတ်ပြီးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ မီးလေး at 11:450comments Links to this post
သားသားလေးရဲ့ ၄.၃.၂၀၁၂တွင် ကျရောက်သော မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှသည် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၍ ကံကောင်းပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဒီပို့စ်လေးကနေ ထပ်ဆင့် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၁ရဲ့ ဒီအချိန်လေးမှာ ဆေးရုံမှာပေါ့ သားသားလေး လူ့လောကထဲ ရောက်လာပြီ စသည်ဖြင့် ထိုအချိန်က ရင်ခုန်ခဲ့ရတာတွေဟာ မနေ့တနေ့ကလိုပါပဲလို့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ပြိုင်တူပြောပြီး ရီခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံရယ်တာကြည့်ပြီး သားသားကလည်း ခစ်ခစ်နဲ့ လိုက်ရီနေတဲ့ သားလေးဟာ ကျွန်မအတွက် လတစ်စင်းပါ။ (အမျိုးသားကတော့ နေတစ်စင်းပေါ့... ကြုံတုန်းလေး ကြွားတာ... :D) ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးအတွက် ပိုပြီး ခိုင်မြဲစေတဲ့ ကြိုးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတွယ်တာရပါသော သားလေးရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ဘယ်လိုလေးလုပ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်ထဲက တန်းစီနေပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အိမ်မှာ ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ သံဃာတော် ၅ပါးကို စင်္ကာပူဒန်ပေါက် နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်တယ်။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် န၀ကမ္မအလှူငွေ တစ်သိန်းကျပ်နှင့် သံဃာတစ်ပါးစီအတွက် ၅၀၀၀ကျပ်စီ လှူဒါန်းပါတယ်။ ထို့နောက် အိမ်နားမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလည်း ဒန်ပေါက်ဆွမ်း သွားပို့ လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သားသားလေးရဲ့ မွေးနေ့မှ ပြုသမျှသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကျွန်မတို့ မိသားစုနဲ့ထပ်တူ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အမျှပေးဝေပါတယ်။ သာဓုခေါ်ဆိုတော် မူကြပါကုန်......
စာရေးသူ မီးလေး at 01:000comments Links to this post
(ဤဘလော့ဂ်ပေါ်မှ စာများသည် ကျွန်မ၏ အတွေးအခေါ်မျှသာဖြစ်ပါသည်...)
ဟုတ်ပါတယ် မိဘတိုင်းက လောဘကြီးကြပါတယ်။ ဘယ်အပေါ်မှာ လောဘကြီးလည်းဆိုရင် သားသမီးတွေ အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဂရုဏာ စသည့်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ သားသမီးကို ပေးဆပ်တဲ့သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေအပေါ် ထားတဲ့ စိတ်စေတနာ အမြဲတမ်း အားရကျေနပ်မှုမရှိကြတာ မိဘတွေပါပဲ။ သားသမီးတွေကို ထူးချွန်ထက်မြတ်ပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ သူလေးတွေ ဖြစ်လာစေချင်ကြပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးမားမားထားကြပြီး သူတို့အတွက် တတ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မတတ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ ပံ့ပိုးကူညီကြတယ်။ မိဘတွေရဲ့ စိတ်စေတနာတွေဟာ စာနဲ့ ဖွဲ့မရနိုင်အောင် နက်ရှိုင်းလှပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးမှာ အရမ်းလောဘကြီးကြပါတယ်။ တချို့ တတ်နိုင်တဲ့ မိသားစုတွေကလည်း တတ်နိုင်တဲ့အလျှောက် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေမှာ ထားကြသည်။ တချို့မိဘတွေက နာမည်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ထားကြသည်။ တချို့(အများစု)ကတော့ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် စာသင်ကျောင်းများမှာပဲ ကျောင်းထားကြသည်။ တချို့က နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းထားကြသည်။ မည်သည့်နေရာမှာပင်ထားထား အားလုံးမှာ သားသမီး ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက် တခုတည်းသာ ဖြစ်သည်။
ပြည်ပမှာ ကျောင်းထားတဲ့မိဘများမှာ အတူလိုက်နေနိုင်တာ ရှိသလို၊ အတူလိုက်မနေနိုင်တဲ့ မိဘ များလည်း ရှိပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်သားသမီးများကို ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲမှ ခွဲထုတ်ပြီး ပြည်ပမှာ ပညာသင်ကြားစေသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်မှ သားသမီးက ပြန်လာလို့ တွေ့ရတာ (သို့) မိဘက လိုက်သွားမှသာ မိဘနှင့် သားသမီး ပြန်ဆုံကြရသည်။ ဘယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပဲနေနေ မိဘနဲ့နေတာလောက်တော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ ကျောင်းပြီးပြန်တော့ အမိမြေမှာ မိဘပိုင် လုပ်ငန်းရှိတဲ့သူကြ ပြန်လာပြီး ဦးစီးလုပ်ကြပေမဲ့ လုပ်ငန်းမရှိတဲ့ သူတွေကျ ပြန်လာဖို့ ဝေးသထက် ဝေးလာကြပြန်တယ်။ ရထားတဲ့ ဘွဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပညာ အရည်အချင်းကြောင့် လက်ရှိ ကိုယ်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အမိမြေမှာ အလုပ်ပြန်လုပ်တာထက် ပိုဝင်ငွေကောင်းတော့ အဲ့နိုင်ငံမှာပဲ အလုပ်လုပ်၊ အိမ်ထောင်ကျနဲ့ အမိမြေက အမေ့အိမ်ကို ပြန်လာနိုင်မဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းသွားကြတယ်။
နာမည်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ထားတဲ့ မိဘတွေ(အများစု) ကျပြန်တော့ မိဘတွေအချင်းချင်း ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစား၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ စီးလာတဲ့ ကား စတာတွေ ပြိုင်ဆိုင်နေတော့ ကလေးတွေကအစ အ၀တ်အစား၊ အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်တွေ အချင်းချင်းပြိုင်နေကြပြန်တော့တယ်။ အဲ ကြားက ထောတာကတော့ ဈေးသည်တွေပါပဲ တခြားကျောင်းတွေမှာ ရောင်းတဲ့ဈေးထက် ဈေးတင်ထားကြသေးတယ်။ ကောင်းကြသေးရဲ့လား အရပ်ကတို့ရေလို့သာ အော်လိုက်ချင်တော့တယ်။ (အော်လည်း အော်ပြီးပြီနော်... :P)
နာမည်မရှိတရှိကျောင်းကျတော့ တမျိုး အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေ အနေနဲ့ သိထားရမှာက ကိုယ့်ကလေးတွေကို လမ်းကြောင်းမှားပေါ် လျှောက်မိအောင် မသင်ပေးမိစေဖို့ပါပဲ။ မိဘအများစုက သားသမီးတွေရဲ့ အဆင့်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ ကြွားဝါတတ်ကြပါတယ် (ကျွန်မအမေ အပါအ၀င်ပေါ့)။ ကျွန်မ သမီးပေါ့ အဆင့်ဘယ်လောက်ရတာ (မသိခင်ကတော့ အဲ့လို အမေပြောတိုင်း အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ရပါတယ်)။ တနေ့ အခန်းမတူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အမေနဲ့ ဈေးမှာ ဆုံမိကြတဲ့အခါ အမေချင်း ဒီတပတ် အဆင့်ဘယ်လောက်ရတယ် ပြောကြတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက အဆင့် ၈ ရတယ်လို့ သိရတယ်။ အမှတ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ရလဲ မေးမိတော့ သူ့အမှတ်က ကျွန်မနဲ့ သိပ်မကွာတာ သိလိုက်ရတယ်။ အဲ့တုန်းက ကျွန်မက အဆင့် ၃၊ သူနဲ့ကျွန်မ အမှတ်ပေါင်းကွာခြားချက်က ၃မှတ်လောက်ပဲ ကွာတယ်။ ကျွန်မတို့ အခန်းမှာဆို အဆင့် ၅အတွင်း ၀င်မှာ သေချာတယ်။
အဲ့အချိန်က စလို့ ကျွန်မနားလည်လိုက်တာက အဆင့်ဆိုတာ စံတခုပါပဲ။ ရမှတ်ကမှ ကိုယ်တကယ်တတ်ကျွမ်းမှုကို ဆိုလိုတယ်လို့ သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ တကယ် တတ်ကျွမ်းခဲ့ပါသလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါ မတတ်ကျွမ်းဖူးဆိုတာ သိလာရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပညာသင်စနစ်က ဒီလပတ်မှာ သင်ခန်းစာ ဘယ်လောက်ကနေ ဘယ်လောက်ထိကျက်ရမယ်ဆိုပြီး ကျက်ခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒီ သင်ခန်းစာတွေပဲ မေးတယ် ဖြေပြီးပြန်တော ဖြေပြီးသား သင်ခန်းစာတွေ လှည့်ကြည့်စရာတောင် မလိုတော့ဘူး။ အဲ့တော့ တတ်ကျွမ်းတဲ့သူက အနည်းစုဖြစ်လာတယ်။
နောက်တခု အဆင့်ဆိုလို့ အတန်းထဲမှာ အဆင့်ပေးတာကလည်း အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာ/မနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ ကျူရှင်ယူတဲ့သူတွေက မယူတဲ့သူတွေထက် အမှတ်ပိုများတယ်။ ကျွန်မတို့ အလယ်တန်းလောက်က အတန်းပိုင်ဆရာမ ဦးစီးပြီး အိမ်မှာ ကျူရှင်ဝိုင်းသင်တယ်။ ၀ိုင်းမှာ သင်တဲ့ ဆရာ/မ အများစုက အတန်းထဲဝင်တဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာ/မတွေ အများစုပါတယ်။ မိဘတွေကလည်း အဲ့လိုဝိုင်းတွေမှာ ရွေးထားကြတယ်။ ဒါလည်း မိဘတွေ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး သားသမီးကို တော်စေချင်တဲ့ အတန်းထဲမှာ အဆင့်ဝင်စေချင်တဲ့ စိတ်ပါ။ အဲဒါက ကလေးတွေကို လမ်းလွဲစေပါတယ်။ အတန်းပိုင်ဆီမှာ ကျူရှင်တက်မှ အမှတ်ကောင်းကောင်းရမှာတို့၊ အဆင့်ဝင်မှာတို့ အဲသွားကန်တော့ရတာလည်း ရှိသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ဆရာမတွေဆီ ကျူရှင်ယူကြ သွားကန်တော့ကြနဲ့ သူတို့တွေထဲမှာ ကျွန်မ မပါတာတော့ သေချာပါတယ်။ အဲလို လုပ်ရမှာ ၀ါသနာလည်း မပါခဲ့ဘူး။ သူများ မိုးခါးရေ သောက်တဲ့အချိန် လိုက်မသောက်ခဲ့မိတဲ့ ကျွန်မကို အမေက လူ့ဂွစာလို့ ပြောပါတယ်။ :P
ကျောင်းက ဆရာကန်တော့ပွဲအပြင် အိမ်မှာ လိုက်ကန်တော့တာမျိုး အမေလုပ်ခိုင်းတာတောင် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အတန်းထဲမှာ အဆင့်ဝင်ရင် အတန်းဖော်အချင်းချင်း “ရမှာပေါ့ ဆရာမကို သွားကန်တော့ထားတာလေ”လို့ အပြောခံရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက အဲ့လိုအပြောမခံနိုင်လို့ သီးသန့်ကန်တော့တာမျိုး မလုပ်ပါ။ ကျွန်မက တခုခုရချင်လိုစိတ်နဲ့ တခုလိုက်လုပ်တာမျိုး လုပ်ရတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းကို ရှက်မိလို့ပါ။ လမ်းမှာတွေ့ရင် အာစရိယ ဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်တဲ့အတွက် ခြင်းတောင်းကူဆွဲပေးတာတို့၊ စာအုပ်တွေ ကူသယ်ပေးတာတို့၊ အတန်းထဲမှာ တခြားလုပ်စရာရှိတာတွေ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်မက အရွဲ့တိုက်တဲ့စိတ်တော့ နည်းနည်းမဟုတ်ဘူး တော်တော့်ကို ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ပထမတန်း ပညာသင်ကြားနေချိန်မှာ အတန်းပိုင်ဆရာမက အထက်တန်းကျောင်းကို ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မူလတန်းကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းအထိ အတန်းပိုင် ဆရာမတဦးထဲ အတန်းကိုင်ပါတယ်။ နောက်ရောက်လာတဲ့ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျွန်မရဲ့ တ၀မ်းကွဲအဒေါ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒုတိယတန်း ပညာသင်နှစ်ကစလို့ ကျွန်မ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲမှာ ပထမ မရတော့ပါဘူး (ကြုံတုန်းလေး ကြော်ငြာဝင်တာ )။ ကျွန်မ ပထမဆု မရတာ ကျွန်မ ညံ့လို့ မဟုတ်ဘဲ အဒေါ်က သူ့ကို သူများပြောမှာ စိုးလို့ပါတဲ့လေ။ အဲ့ကတည်းက ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ မှားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ စ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ ငါကြိုးစားလည်း ဘာထူးမှာလဲ ပထမ မရမယ့်အတူတူ သူများတွေလိုပဲ ပုံမှန်လေးပဲ စာလုပ်တော့မယ် ဆိုပြီး အတွေးဝင်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ နှစ်စဉ် တတိယနေရာကနေ မတက်တော့ပါဘူး။
အမှန်က ပထမ နေရာပဲပေးပေး ဘယ်နေရာပဲ ပေးပေး ကိုယ်စာရဖို့သာ အဓိကလို့ မတောက်တခေါက် ဥာဏ်နဲ့ မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အမေကလည်း ကျွန်မဘာကြောင့် တတိယကနေ မတတ်တာလဲလို့ သေချာ အဖြေမရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ခဗျာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေရတာကိုး။ စာမလုပ်ဘဲ အဆော့မက်တယ်လို့ဘဲ အပြစ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သားသမီးတွေ အပြောင်းအလဲကို မိဘတွေ သတိထားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ တချို့မိဘတွေဆို သားသမီးကို လုံးဝကို လှည့်မကြည့်နိုင်တာပါ။ လှည့်ကြည့်ချင်ပေမယ့် လှည့်ကြည့်ဖို့ အခြေအနေမပေးတဲ့ မိဘတွေလည်း အများကြီးပါ။ စားဝတ်နေရေး၊ ကျောင်းစရိတ် စသည် စသည်တွေက ရှိသေးတယ်မို့လား။
နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို ကျွန်မတို့ အရမ်းပျော်ခဲ့ရပါတယ်။ ခုများတော့ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် မရောက်ခင်ထဲက ကြိုနေကြတဲ့ သင်တန်းတွေ အားပါးပါး မနည်းမနောပါဘဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မအမြင်က နွေကျောင်းပိတ်ရက်ကာလမှာ စိတ်ဖိစီးမှုမပါတဲ့ သူတို့ ၀ါသနာပါတဲ့ သင်တန်းတွေကိုပဲ မိဘတွေက ရွေးချယ်တတ်ခိုင်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းပိတ်ရက်ပဲ သူတို့ခမျာ နားရတာကိုး ကျောင်းဖွင့်တာနဲ့ ကျောင်းစာ၊ ကျူရှင်စာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက မဖိတ်ခေါ်ဘဲ အလိုလို သူတို့ဆီ ရောက်လာနေကြမို့ပါ။
ဖြစ်နိုင်လျှင် မိဘတွေ ကိုယ့်သားသမီး ၀ါသနာပါတာ လေ့လာပါ၊ အားပေးပါ၊ ပံ့ပိုးကူညီပါ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့။ အင်ဂျင်နီယာတတ်ချင်တဲ့ သားသမီးကို ဆေးကျောင်း အမှတ်မီတာပဲ ဆေးကျောင်းပဲ တတ်ပါလို့ အတင်းမတတ်ခိုင်းပါနဲ့။ မိဘတတ်ခိုင်းလို့ မလုပ်ချင်ဘဲ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က သူတို့အတွက် မကောင်းပါဘူး။ သူတို့ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရရင် စိတ်ပျော်ရွှင်ပြီး အလုပ်ခွင်ဝင်ကြတဲ့အခါ အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာပါ။ မိဘက ဒါလုပ်လို့ ပြောလို့လုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်း အောင်မြင်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ မိဘကတော့ ဖြစ်ချင်ဇော ကြီးတာကိုး မိဘတဦးအနေနဲ့ ဒါလေးက သင့်တော်တယ် ထင်ပေမယ့် မိဘက လျှောက်လှမ်းရမှာ မဟုတ်ဘဲ သားသမီးက တဘ၀လုံး လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘ၀ခရီးပေကိုး စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်မှုကလည်း အဓိက ကျတာပေါ့။ မိဘလုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်လုပ်ပါလို့ မပြောဘဲ ဒါလေး လုပ်ရင်ကော မကောင်းဘူးလား ၀ါသနာမပါဘူးလား။ သားသမီးနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး လုပ်ရင် မိဘရော သားသမီးပါ စိတ်ချမ်းသာရမှာ အမှန်ပဲ မဟုတ်ပါလား။
မိဘနဲ့ သားသမီး အပေးအယူမျှပြီး အားလုံးစိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
စာရေးသူ မီးလေး at 13:090comments Links to this post
ရှိသည် ဖြစ်သည် ချစ်သည်
အခုတလော အရမ်းကြိုက်ပြီး နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေး သီချင်းအေးအေးကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြိုက်မယ်ထင်လို့ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီချင်းခေါင်းစဉ်က “ရှိသည် ဖြစ်သည် ချစ်သည်”တဲ့ တေးသံရှင် ချမ်းချမ်းက သီဆိုပေးထားပါတယ်။
တေးရေး - နေထိုက်စိုး ၊ တေးဆို - ချမ်းချမ်း
အချစ်စစ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ ပြီ သူ့မျက်ဝန်းရဲ့ ပုံရိပ်ဆီ အတွင်းစိတ်တွေ သိကြတယ်...
ဒီလိုသက်ရောက်မှူလေးတွေ တစ်မိုးအောက်တစ်ယောက်သာ ချစ်သွားမည်..
အဆိုးကောင်းမျှဝေခံစားကာ နှလုံးသားထဲစေ့စပ်ကာ ရင်ခွင်လေးထဲ ခိုနားဆဲ...
ရှိသည် ဖြစ်သည် အချစ်က အရာရာဖန်ဆင်းသည်...
ထပ်တူ ချစ်သည် ချစ်သည် မျက်စိမှိတ်ကာယုံတော့မည်
မိုးသက်လေပြင်းကျတဲ့အခါ ဘ၀ရဲ့ အိမ်ကလေးအားတင်းပါ...
မပူပါနဲ့အချစ်စစ်ရဲ့ အခက်ခဲဆိုတာ ကြုံရမှာ...
ဘေးစကားတွေ အချစ်ကို ကိုးကွယ်ယုံစားသည် ချစ်တာ ........ ချစ်တာ .....
စာရေးသူ မီးလေး at 18:250comments Links to this post
ဇန်န၀ါရီလ- မီးလေးတို့မိသားစု ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသွားခဲ့ကြပါတယ်... နှစ်စမှာ အရမ်း ကို ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်... မကြာခင် ရင်သွေးလေးရလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းလည်း ရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်... မွေးလာမယ့် ကလေးဟာ ဘယ်လိုပုံလေးဖြစ်မလဲ? ဘယ်သူနဲ့ တူမလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့ပါတယ်...
မတ်လ - ၄ရက်နေ့ မီးလေးအတွက် ဘ၀မှာ အပျော်ဆုံးနေ့ထဲမှာ တရက် အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... မီးလေးတို့ ဘ၀ထဲကို သားသားလေး စရောက်လာခဲ့လို့ပါပဲ...
စာရေးသူ မီးလေး at 22:270comments Links to this post
ဆုဝေ (Prize Wai)
Announcement News (4)
Blood Donor Club (1)
tag အဖြေ (8)